कांग्रेस सभापतिका प्रत्यासी डा. शेखर कोइराला के गर्दैछन् ? - Action Khabar - Nepali Online News Portal
काठमाडौं । आगामी भदौमा नेपाली कांग्रेसको १४ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने मिति तय भएको छ । महाधिवेशनका कामहरु धमाधम भइरहेपनि कोरोना संक्रमणको दोश्रो भेरियन्टले कांग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित त हुँदैन ? शंकाहरु उठिरहेका छन् ।
यद्यपि, कांग्रेसले नयाँ सदस्यता वितरण तथा क्रियाशिल सदस्यता नविकरणका कामहरु धमाधम गरिरहेको तथा हिजो मात्रै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै भदौमा महाधिवेशन हुने जनाएका छन् ।
१४ औं महाधिवेशनलाई नेपाली कांग्रेसले पुस्ता हस्तान्तरणको अभियानका रुपमा पनि लिएको छ । खासगरी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले अबको महाधिवेशन पछि पार्टीमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश हुने बताउँदै आएका छन् । तर, केही समययता डा. शेखर कोइराला काठमाडौंमा छैनन् । कोरोना संक्रमणको दोश्रो भेरियन्ट शुरु भएसँगै राजधानी छाडेका डा. शेखर कहाँ छन् ? आम कार्यकर्ता र जनताकै चासो हो ।
आगामी महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिका लागि उम्मेद्वारी दिने अनौपचारिक घोषणा नै गरेका डा. कोइराला आजभोली के गर्दैछन् ? एक्सन खबरले केही दिन अगाडी डा. शेखर कोइरालासँग एकाविहानै संवाद गर्दा डा. शेखरले जवाफ दिए–‘कोरोना संक्रमणको यो महामारीमा कुनैपनि भेटघाट, भेलाहरुमा हिँडडुल गर्न नसकिने भएकोले म आजभोली मेरो गृह जिल्ला विराटनगरमा छु ।’
१४ औं महाधिवेशनको संघारमा देशभरका कांग्रेसी माझ महाधिवेशनको माहौल बनाउने एक मात्र नेताका रुपमा उभिएका डा. शेखर कतै महाधिवेशनबाट पछि हटेको त हैन ? यस्तो प्रश्न सँगै डा. कोइरालाले उल्टै प्रश्न गर्दै भने–‘तपाईं कति घन्टा बाहिर निस्कनु हुन्छ ?’ कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण पनि मानिसहरु एकापसमा भेटघाट गर्न नसकेको प्रशंग निकाल्दै डा. कोइरालाले आफु फिजिकल रुपमा नेता, कार्यकर्ताहरुसँग जोडिन नसकेपनि भर्चुवलको माध्यमबाट देशभरका कार्यकर्ताहरुसँग दैनिक संवादमा रहेको बताए ।
‘अहिले फिजिकल रुपमा भेटघाट गर्ने, संवाद गर्ने परिस्थिति छैन । नेपाली कांग्रेसभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने अवस्था छैन । म पदाधिकारी हैन, सभापतिजीले मलाई बोलाउनु पनि हुन्न । तर,पनि म हरेक दिन कार्यकर्ता, नेता र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिइरहेको छु ।’ डो शेखरले भने–‘म जुम, फेसवुक मार्फत जनताका, कार्यकर्ताका गुनासा, भावनाहरु बुझिरहेको छु, कोरोनाका कारण समस्यामा परेका जनतालाई कसरी हुन्छ सहयोग गर्नेमा जुटिरहेको छु ।’
डा. शेखरले कोरोना महामारीका कारण प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर कार्यकर्ताहरुसँग संवाद गर्न नसकिएपनि भर्चुवलको माध्यमबाट आफु प्रत्येक दिन जोडिइरहेको पनि बताए । यो बेला महाधिवेशन भन्दापनि कोरोना संक्रमणबाट कसरी पार पाउने भन्ने रहेकोले आफ्नो ध्यान पनि कोरोनाबाट जनतालाई तथा आम कार्यकर्तालाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने मै रहेको तर्क गरे । ‘हरेक जिल्लाका नेतृत्व तहका साथीहरुसँग कोरोनाका कारणले परेको असरका बारेमा जुम तथा फोन मार्फत कुरा गर्छु ।
त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्था, पिसिआरको अवस्थाका बारेमा ग्रासरुटका साथीहरुसँग संवाद र छलफल गरिरहेको छु, जिल्ला र केन्द्रका साथीहरुसँग पनि संवाद, छलफल गरिरहको छु । अहिलेको सिच्युएसनमा यो भन्दा अगाडी बढेर भेट गर्ने अवस्था छैन ।’ चिकित्सक समेत रहेका डा. शेखरले कोरोना कहरलाई निस्तेज गर्न राजनीतिक दल, नेतृत्व र सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए।
भदौमा महाधिवेशन होला ?
‘कुनैपनि हालतमा भदौमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ । हुनुपर्छ ।’ डा. शेखरको जिकिर छ । तर, कसरी ? डा. शेखर भन्छन्–‘भदौमा कुनैपनि हालतमा महाधिवेशन हुनुपर्छ, संबैधानिक रुपमा पनि गर्नैपर्छ ।
अब फिजिकल रुपमा भेला भएर गर्न सकिएन भने बैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ ।’ उनले आजभोली भदौमा कसरी महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भनेर पार्टी पंङ्ती र पदाधिकारीहरु विच छलफल भइरहेको बताए ।
कोरोनाबाट सुरक्षित हुने चिन्ता
विराटनगरमा बसेर डा. शेखर अहिले भर्चुवलकै माध्यमबाट जनता र पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई कोरोनाबाट कसरी बच्ने, बचाउने, पोजेटिभ भइहाले के गर्ने ज्ञान पनि बाडिँरहेका छन् । उनको दैनिकी आजभोली भर्चुवल संवाद, बैठक, छलफल तथा टेलिफोन मार्फत भइरहेको छ । ‘डा. शेखर कोइराला गृह जिल्लामै भएपनि देश विदेशमा रहनुभएका कार्यकर्ता र जनतासँग संवादमा हुनुहुन्छ ।
उहाँ पार्टीको महाधिवेशनसँगै कोरोना संक्रमणबाट जनतालाई कसरी सुरक्षित गर्ने गराउनेमा बढी चिन्तित हुनुहुन्छ ।’ डा. शेखरका स्वकीय सचिब दिनेशचन्द्र थपलियाको भनाई छ । डा. शेखरले अहिले कोरोना संक्रमितले होम आइसोलेसनमा बस्दा के गर्ने नगर्ने फोनै मार्फत पनि सल्लाह दिइरहेका छन् ।
संक्रमतिलाई पल्स अक्सिमिटर साथमा राख्न, पेटको वलले सुत्न, शारीरिक तथा मानसिक रुपमा सकारात्मक बनाउन सल्लाह दिइरहेका छन् । यसका अलावा कसैलाई वेड, अस्पताल आवश्यक भएमा आफ्नै बलबुताले हस्पिटलहरु, वेहरु मिलाउने संक्रमितलाई आइसोलेसन, क्वारेन्टाइनमा पुर्याउन सहजीकरण गर्ने काम पनि गरिरहेका छन् ।
हरेक वडाहरुमा भेन्टिलेटर सहितको आइसोलेसन
यो विच डा. शेखरले स्थानीय, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर आफ्नो क्षेत्रका जनताका लागि पनि धेरै काम गरेका छन् । खासगरी कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्ने तथा आइसोलेसनहरु तयार गर्न डा. शेखरको पहल कदमी छ । उनले विराटनगरमा कांग्रेस, एमाले जोजो जुममा आए उनीहरुसँग भर्चुवल संवाद नै गरेर १ सय वेडको नागरिक केयर सेन्टर तयार पारेका छन् । जहाँ अक्सिजनसहित भेन्टिलेटरको समेत व्यवस्थापन गरिएको छ ।
नेपालमा सबै नागरिकहरुको सुविधासम्पन्न घर नभएकाले अब वार्डवार्डमा १० देखि १५ वेडको आइसोलेसन बनाउन आवश्यक देखिएको डा. शेखरको भनाई छ । ‘हाम्रो घरको बनौट, संरचना र पूर्वाधारले घरलाई नै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बनाएर बस्न सक्दैनौं अब वडागत रुपमै १० देखि १५ वेडको आइसोलेसन बनाउनु पर्छ । त्यहाँ एक जना चिकित्सक, स्वास्थ्य स्वयं सेवक, अक्सिजन र भेन्टिलेटर पनि राख्नुपर्छ ।’
कांग्रेसमा डा. शेखर अध्ययन गर्ने नेताका रुपमा परिचित छन् । उनी राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय भूराजनीतिसँगै अर्थ राजनीति बारे बढी चासो राख्छन् । कोरोना संक्रमणको दोश्रो भेरियन्टयता डा. शेखरले दुईवटा पुस्तक पढि सके । ‘यो विचमा मैले २ वटा पुस्तक पढी सकेको छु । एउटा जोसेफ स्टिग्लिटज् जो क्लिन्टनको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो । जो विश्व बैंकको चिफ हुनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा लेखेको किताब र अर्को रिभेञ्जर जोग्राफी सकाएँ ।’ डा. शेखर भन्छन्–‘केन्द्रीय नेताहरुसँग आजसम्म भएका राजनीतिक, सामाजिक घटनाहरुका सवालमा विचार विमर्श गर्ने, कोरोना संक्रमणका बेला बर्तमान ओली सरकारले निभाएको भूमिकाका सन्दर्भमा पनि विचार विष्लेशण गर्दैछु । म राजनीतिबाट टाढा भएको चैं छैन । मात्र फिजकल रुपमा सक्रिय हुन नसकेको हो भर्चुवल माध्यमबाट म ७७ वटै जिल्लाका कार्यकर्ता र साथीहरुसँग जोडिइरहेको छु ।’
डा. शेखरले विज्ञान र प्रविधिलाई आत्मसात गरेका छन् । कोरानाकै कारण मान्छेहरु घरभित्र बसेका बेला डा. शेखर भर्चुवल माध्यम जुम, फेसवुक ट्विटर तथा टेलिफोनबाट हरेक कार्यकर्ताका माझ पुगिरहेका छन् ।
त्यागको राजनीतिका पर्याय
कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत ल्याएर लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका डा. कोइरालाले पार्टीभित्र त्यत्तिबेलै त्यागको राजनीति देखाए । महासचिबमा प्रमुख दावेदार डा. शेखरले पार्टीमा वीपी पुत्र डा. शशांक कोइरालालाई ठाउँ दिए ।
त्यसबेलै १४ औं महाधिवेशनमा डा. शेखरलाई कोइराला परिवारबाट सभापतिमा उठाउने सहमति थियो । त्यसो त एक वर्षयता शशांक, सुजता र शेखर कोइरालाले एकै मञ्चबाट कोइराला परिवारबाट एक जना सर्वसम्मत सभापतिको उम्मेद्वार हुने घोषणा पनि गरेका छन् । भलै डा. शेखरको नाम लिइएको छैन ।
तर, अब कांग्रेसको विरासत पुर्नस्थापित गर्न र मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, नयाँ संविधानको स्थायीत्वका लागि पनि बलियो कांग्रेसको आवश्यक्ता महशुष गरिएको छ । र, कांग्रेसलाई वीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद कोइरालाको पालाको जस्तो राष्ट्र, राष्ट्रियता र समाजवादको पक्षमा उभ्याउन पनि डा. शेखरको आवश्यक्ता देखिएको छ ।
कांग्रेसमा वीपीपछि गणेशमान, कृष्णप्रसादलाई त्यागी नेताका रुपमा अहिले डा. शेखर कोइरालालाई लिने गरिन्छ । तर, अहिले कांग्रेस भित्र त्यागको राजनीति भन्दा पनि वीपी, गणशमान र कृष्णप्रसादको विरासत जोगाउने चुनौति छ । मुलुकको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, नयाँ संविधान, मानव अधिकार जोगाउने चुनौति छ । यी सबैलाई संरक्षण गर्दै मुलुकलाई समाजवाद तर्फ उन्मुख गराउन पनि कांग्रेसमा डा. शेखरको नेतृत्व अपरिहार्य छ ।
- २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १०:५१ मा प्रकाशित